Mụta ihe ị ga-eme n'oge ihe omume ihu igwe dị oke egwu | Netwọk Mgbasa Ozi
New Orleans mgbe Ajọ Ifufe Katrina na 2005
Ọ bụ ihe nzuzo na oké ihu igwe ihe Ha na-arịwanye elu n'ụzọ dị egwu na gburugburu ụwa n'ihi mgbanwe ihu igwe. N'ime nnyocha e bipụtara na United States, nke sitere na Akụkọ Pụrụ Iche na Ihe Omume (nke aha ya na Bekee bụ SREX), a dọrọ aka ná ntị na mgbanwe ihu igwe ga-eme ka oke ọkụ, oke mmiri ozuzo na ifufe si Oké ifufe.
Ma gịnị ka anyị ụmụ amaala nwere ike ime? Nke mbu, gaa n'ihu na-akpọ ndị gọọmentị ka ha belata ikuku carbon, n'ihi na ọ bụ naanị ya bụ ụzọ iji kwụsị ya mgbanwe ihu igwe nke ụwa anyị nọ n'ime ya n'oge a. Ọ nwere ike ịbụ na ọ ga-egbu oge ugbu a, mana ha nwere ibu ọrụ ịnwale, n'ihi na nsonaazụ zuru ụwa ọnụ adabaalarị.
Nke abụọ, ihe anyị ga-eme bụ ịmụ ka anyị ga-esi chebe onwe anyị na ndị ezinụlọ anyị n’oge nsogbu ihu igwe dị egwu. Ka anyị wee mara ihe anyị ga-eme n'otu n'ime ọnọdụ ndị a, FEMA, Agencylọ Ọrụ Njikwa Mberede nke United States, na-enye ihe ndị a consejos:
Nọgide na-agwa gị. Idenye aha na mpaghara mberede alerts maka mmelite.
Gbaa mbọ hụ na ị nwere redio batrị ma ọ bụ ngwaọrụ ọzọ ma ọ bụrụ na enweghị ike.
Mee atụmatụ n'ọdịnihu. Nwee atụmatụ mbupụ na ngwa ngwa mberede. Lelee ndepụta sitere na Red Cross, Federal Federal Agency Agency (FEMA), ma ọ bụ forlọ Ọrụ Maka Nchịkwa na Mgbochi Ọrịa (CDC) iji hụ ihe ị chọrọ.
Soro ndị ikwu gị, ndị enyi, na ndị agbata obi gị na-emekọrịta ihe.
Jide n'aka na ị nwere nri mkpọ nke anaghị achọ friji na mmiri ọ drinkingụ drinkingụ. Ọ dịkarịa ala lita mmiri 4 maka otu onye na kwa anụ ụlọ kwa ụbọchị.
Chekwaa ma ọ dịkarịa ala ụbọchị atọ maka onye ọ bụla nọ n'ezinụlọ.
N'ime ihe omume na-ekpo ọkụ, hụ na ndị kachasị ike (ndị agadi, ndị ọrịa na ụmụaka) nọ ebe dị jụụ na mmiri zuru oke.
Nọrọ n’ụlọ ruo ogologo oge o kwere mee. Ọ bụrụ na ịnweghị ikuku ikuku, nọrọ na ala kachasị ala, pụọ na ụzarị anyanwụ. Gbalịa ịdị na-aga kwa ụbọchị maka awa ole na ole gaa n’ụlọ ọha na eze nwere igwe ikuku.
N'ihe ize ndụ nke ịda ụda, nke bụ eziokwu bụ na ọtụtụ puku oke ihu igwe mere na United States na 2011 naanị ma a na-atụ anya na nke a ga-abụ ọnọdụ maka iri afọ ole na ole sochirinụ gburugburu ụwa. Ya mere, ị bụ ụkpụrụ nduzi ha nwere ike ịbara anyị uru karịa ka anyị chere.
Ozi ndị ọzọ - Tropical ịda mbà n'obi "Beryl" ga-abụ ebe ebe okpomọkụ ọzọ
Isi mmalite - ala
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Mgbanwe ihu igwe » Mụọ ihe ị ga - eme n'oge oke ihu igwe
Oké ifufe mmiri na Dubai